PHOTOS: Mnangagwa sworn in as Zimbabwe’s new president | MagOne 2016
New interim Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa walks after he was officially sworn-in during the ceremony in Harare. Zimba...
New interim Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa walks after he was officially sworn-in during the ceremony in Harare. Zimbabwean newly sworn-in President Emmerson Mnangagwa (L) flanked by his wife Auxilia gestures during the ceremony. Zimbabwean newly sworn-in President Emmerson Mnangagwa and his wife Auxilia sit during the Inauguration at the National Sport Stadium in Harare. Supporters hold posters of Zimbabwean newly sworn-in President Emmerson Mnangagwa during the Inauguration at the National Sport Stadium in Harare.. Newly sworn in Zimbabwe’s president Emmerson Mnangagwa (C) walks after taking the oath of office at the national sports stadium on the outskirts of Harare. Members of the Zimbabwean military hold posters of newly sworn-in President Emmerson Mnangagwa at the National Sport Stadium in Harare. Soldiers parade during the inauguration ceremony of the newly sworn-in President at the National Sport Stadium in Harare
iHype9ja's Diary: PHOTOS: Mnangagwa sworn in as Zimbabwe’s new president